Xeeladaha SEO: Sidee Lagu Heli Karaa Qiimaynta Ganacsigaaga Raadinta dabiiciga ah 2022? | Martech Zone
Xeeladaha SEO: Sidee Lagu Heli Karaa Qiimaynta Ganacsigaaga Raadinta Dabiiciga ah 2022?
Isniin, Maarso 28, 2022 Isniin, Maarso 28, 2022 Douglas Karr
Waxaan hadda la shaqaynaynaa macmiil leh ganacsi cusub, sumad cusub, domain cusub, iyo degel cusub oo ecommerce ah oo ku jira warshado tartan badan leh. Haddii aad fahamto sida macaamiisha iyo makiinadaha raadinta u shaqeeyaan, waxaad fahamsan tahay in tani aysan ahayn buur fudud oo la fuulo. Noocyada iyo goobaha leh taarikhda dheer ee maamulka ereyada muhiimka ah qaarkood waxay leeyihiin waqti aad uga sahlan ilaalinta iyo xitaa koraan darajadooda organic.
Fahamka SEO ee 2022
Mid ka mid ah wada sheekeysiga muhiimka ah ee aan la leeyahay shirkadaha markaan sharaxo hagaajinta mashiinka raadinta (SEO) maanta waa sida laxaadka leh ee warshaduhu isu beddeleen. Hadafka natiijada makiinadda goob kasta waa in lagu bixiyo liiska agabka bogga natiijada raadinta (SERP) taasi waxay u fiicnaan doontaa isticmaalaha mashiinka raadinta.
Tobaneeyo sano ka hor, algorithms waxay ahaayeen kuwo fudud. Natiijooyinka raadinta waxay ku salaysnaayeen iskuxirayaasha… ururi xiriiriyeyaasha ugu badan ee boggaaga ama boggaaga iyo boggaga ayaa si fiican u qiimeeyay. Dabcan, waqti ka dib, warshadaha ayaa ciyaartay nidaamkan. Qaar ka mid ah shirkadaha SEO ayaa xitaa barnaamij ahaan u dhistay isku xirka beeraha si ay si macmal ah u kordhiyaan muuqaalka matoorka raadinta ee macaamiishooda lacag bixinta.
Matoorada raadinta waa inay la qabsadaan… waxay lahaayeen bogag iyo bogag aad u qiimeeyay kuwaas oo aan khusayn isticmaalayaasha mashiinka raadinta. The bogagga ugu fiican ma ahayn darajooyin, waxay ahaayeen shirkadaha jeebka ugu qoto dheer ama xeeladaha dib-u-celinta ee ugu horumarsan. Si kale haddii loo dhigo, tayada natiijooyinka mashiinka raadinta ayaa hoos u dhacayay… si degdeg ah.
Algorithms-yada raadinta raadinta ayaa ka jawaabay iyo isbeddello isdaba joog ah ayaa ruxay warshadaha ilaa aasaaskeeda. Waqtigaas, waxaan kula talinayay macaamiishayda inay ka tagaan qorshayaashan. Hal shirkad oo dadweynaha u socotay ayaa xitaa ii shaqaaleysiisey si aan u sameeyo baaritaan baaritaan ah oo ku saabsan backlinks-ka ay soo saartay barnaamijka wacyigelinta lataliyahooda SEO. Todobaadyo gudahood, waxaan awooday inaan raadraaco isku xidhka beeraha in la-taliyaha uu soo saaray (ka soo horjeeda shuruudaha adeegga raadinta) iyo gelinta domainka khatarta weyn ee lagu aasayo raadinta, oo ah isha aasaasiga ah ee taraafikada. La taliyayaashii waa la eryay, anaga diiday xiriiriyeyaasha, waxaana ka badbaadinay shirkadda inay dhibaato kasta soo gaarto.
Waa wax la yaab leh aniga in hay'ad kasta oo SEO ah ay aaminsan tahay inay si uun u caqli badan yihiin boqollaal saynisyahano xog ah iyo injineero tayo leh oo si buuxda uga shaqeeya Google (ama matoorada kale ee raadinta). Waa kuwan aasaaska aasaasiga ah ee algorithm darajada dabiiciga ah ee Google:
Bogga ugu sarreeya ee natiijada raadinta Google ayaa halkaas ku soo galay isagoo ah kheyraadka ugu fiican ee isticmaalayaasha mashiinka raadinta, ee ma aha ciyaarta qaar ka mid ah algorithm-ka-xidhiidhinta.
Qodobbada ugu sarreeya ee Google ee 2022
Meesha la-taliyayaashii SEO ee sanado ka hor ay diiradda saari karaan goobta oo leh dhinacyada farsamada ee bogga internetka iyo goobta ka baxsan ee leh backlinks, awoodda maanta ee darajada waxay u baahan tahay faham buuxa oo ku saabsan isticmaalaha mashiinka raadinta iyo khibrada isticmaalaha in aad siiso marka ay ka doortaan goobtaada natiijooyinka mashiinka raadinta. Tani infographic ka Naqshadeynta Websaydhka Cas wuxuu qabtaa shaqo cajiib ah oo lagu daro Qodobbada ugu sarreeya via Raadinta Wargeyska gal arimahan muhiimka ah:
Daabacaada waxyaabo tayo sare leh – Marka aynu ka shaqayno qiimaynta iyo horumarinta a maktabadda Clientsyadayada, waxaan ka shaqeyneynaa soo saarista waxyaabaha ugu fiican marka la barbardhigo goobaha tartanka. Taas macneheedu waxa weeye in aanu samayno cilmi-baadhis aad u badan si aanu u soo saarno bog dhamaystiran oo si fiican loo dhisay kaas oo siinaya booqdayaashayada wax kasta oo ay u baahan yihiin - oo ay ku jiraan is dhexgal, qoraal, maqal, muuqaal, iyo muuqaal.
Ka dhig goobtaada Mobile-Marka hore - Haddii aad si qoto dheer u sii gasho falanqayntaada, waxaad ogaan doontaa in isticmaalayaasha mobilada ay inta badan yihiin isha aasaasiga ah ee taraafikada raadinta dabiiciga ah. Waxaan hor joogaa saacadahayga miiska shaqada maalintii oo aan shaqaynayo… laakiin xitaa waxaan ahay isticmaale mashiinka raadinta mobilada oo firfircoon marka aan joogo magaalada, daawashada bandhigga TV-ga, ama kaliya ku fadhiista qaxwada subaxdii sariirta.
Horumari khibradaada isticmaale – Shirkado aad u badan ayaa raba a helid ee goobtooda iyada oo aan cilmi-baaris ku filan oo ku saabsan in ay u baahan yihiin iyo in kale. Qaar ka mid ah goobaha ugu darajada fiican waxay leeyihiin qaab dhismeed bog fudud, xubno hagitaan caadi ah, iyo qaabayn aasaasi ah. Waayo-aragnimada kala duwani maahan khibrad ka wanaagsan… u fiirso isbeddellada naqshadaynta iyo baahiyaha isticmaalahaaga.
Architecture Site - Bogga internetka ee aasaasiga ah maanta wuxuu leeyahay walxo aad u badan oo u muuqda matoorada raadinta tobaneeyo sano ka hor. HTML horumaray oo waxa uu leeyahay xubno hoose iyo sare, noocyada articles, navigation element, iwm. Halka bogga web fudud dhintay laga yaabaa in darajo wanaagsan, dhismaha goobta waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fudud in la hagaajiyo on site. Waxaan u ekaysiiyaa sidii roog cas loo rogi lahaa… maxaa diidaya?
Vital Muhiimka ah - Vital Muhiimka ah waa aasaaska muhiimka ah ee adduunka-dhabta ah, cabbir isticmaale-ku-dub-dhexaad u ah oo cabbiraya dhinacyada muhiimka ah ee khibradda isticmaale ee mareegaha. In kasta oo nuxurka weyni uu si fiican ugu sarreyn karo makiinadaha raadinta, nuxurka weyn ee dhaafsiisan filashooyinka guud ahaan cabbirrada Core Web Vitals way adkaan doontaa in laga saaro natiijooyinka ugu sarreeya.
Mareegaha sugan Inta badan website-yada waa is dhexgal, taasoo la macno ah in aad soo gudbiso xogta sidoo kale aad ka hesho macluumaad iyaga… sida foomka diiwaangelinta fudud. Goobta aaminka ah waxaa lagu tilmaamaa a HTTPS ku xidhidhka lakabka godad sugan oo sax ah (SSL) shahaado muujinaysa in dhammaan xogta loo soo diray booqdahaaga iyo goobta ay tahay mid sir ah si aanay si fudud ugu qabsan jabsadayaasha iyo aaladaha kale ee shabakadaha. A mareegaha badbaadsan waa waajib maalmahan, ma jiraan wax ka reeban.
Hagaaji Xawaaraha bogga - Nidaamyada maaraynta macluumaadka casriga ah waa goobo xogta ku salaysan oo eegaya, soo ceshada, oo u soo bandhiga macluumaadkaaga isticmaalayaasha. Waxaa jira tan oo ah arrimaha saameeya xawaaraha boggaaga - Dhammaan kuwaas oo la hagaajin karo. Isticmaalayaasha booqda bogga internetka ee degdega ah waxay u muuqdaan inayna soo boodaan oo aysan ka bixin… sidaas darteed makiinadaha raadinta waxay fiiro gaar ah u yeeshaan xawaaraha bogga (Core Web Vitals wuxuu diiradda saarayaa waxqabadka goobtaada).
Ku-habboonaynta Bogga - Habka boggaaga loo habeeyey, loo dhisay, oo loo soo bandhigay gurguurta mashiinka raadinta waxay ka caawisaa mashiinka raadinta inuu fahmo waxa ku jira iyo ereyada muhiimka ah ee ay tahay in lagu tilmaamo. Tan waxa ku jiri kara summadaada ciwaanka, ciwaannada, ereyada dhiirranaanta leh, nuxurka xoogga la saaray, xogta meta, qaybo qani ah, iwm.
Metadata - Meta deta waa macluumaadka aan la arki karin isticmaalayaasha muuqaalka ah ee bogga shabakadda laakiin taasi waxay u qaabaysan tahay qaab uu si fudud u isticmaali karo gurguurta mashiinka raadinta. Inta badan xarumaha maareynta macluumaadka iyo goobaha ecommerce waxay leeyihiin goobo xogta meta ee ikhtiyaari ah oo ay tahay inaad gabi ahaanba ka faa'iidaysato si aad si fiican u hesho macluumaadkaaga si sax ah.
Schema - Schema waa hab lagu habeeyo oo lagu soo bandhigo xogta gudaha boggaaga taas oo matoorada raadinta si fudud u cuni karaan. Bogga badeecada ee bogga e-commerce, tusaale ahaan, waxa uu yeelan karaa macluumaadka qiimaha, sharraxaadaha, tirinta alaabada, iyo macluumaadka kale ee matoorada goobidda ay ku soo bandhigi doonaan si aad loo hagaajiyay. jajabka hodanka ah bogga natiijada mashiinka raadinta.
Iskuxirka Gudaha - Kala sarreynta boggaaga iyo navigation ayaa wakiil ka ah muhiimada waxa ku jira boggaaga. Waa in loo hagaajiyo isticmaalahaaga iyo in loo soo bandhigo matoorada raadinta bogaggee ugu muhimsan macluumaadkaaga iyo khibradaada isticmaale.
Xiriirinta Dhabarka ah ee ku habboon iyo Maamulka - Xidhiidhinta boggaaga ee ka imanaya goobaha dibadda ayaa weli muhiim u ah darajada, laakiin waa in si taxadar leh loo habeeyo haddii aad rabto inaad dardargeliso darajadaada. Wacyigelinta Blogger, tusaale ahaan, waxay ku siin kartaa goobo ku habboon warshadahaaga kuwaas oo leh darajo heer sare ah oo ay ku jiraan isku xirka boggaaga ama boggaaga. Si kastaba ha ahaatee, waa in lagu kasbado waxyaabo aad u fiican… aan lagu riixin spamming, ganacsiyada, ama qorshayaasha isku xidhka lacagta ah. Habka ugu wanaagsan ee loo soo saaro xiriiriyeyaasha aadka u khuseeya iyo awoodda leh waa iyada oo la soo saaro wax weyn Kanaalka YouTube oo la hagaajiyay. Habka ugu wanaagsan ee lagu kasbado xiriiriyeyaasha waa in la soo saaro lana wadaago macluumaad fantastik ah… sida Naqshadeynta Mareegaha Cas ee hoose.
Raadinta Maxalliga ah - Haddii goobtaadu ay wakiil ka tahay adeegga maxalliga ah, oo ku daraya tilmaamayaasha maxalliga ah sida koodka aagga, cinwaannada, calaamadaha caanka ah, magacyada magaalada, iwm. makiinadaha raadinta si ay si wanaagsan ugu tusaan macluumaadkaaga raadinta maxalliga ah. Sidoo kale, ganacsigaagu waa inuu ku daraa Ganacsiga Google iyo hagayaal kale oo la aamini karo. Ganacsiga Google wuxuu hubin doonaa muuqaalka khariidadda laxiriirta (sidoo kale loo yaqaan the xirmada khariidada), hagayaal kale ayaa ansixin doona saxnaanta ganacsigaaga deegaanka.
Whew… taasi waa xoogaa. Waxayna ku siinaysaa xoogaa aragti ah sababta lataliyaha tignoolajiyada raadinta saafigu aanu ugu filnayn. Heerarka raadinta dabiiciga ah ee maanta waxay u baahan tahay isku dheelitirnaanta istiraatijiyadda macluumaadka, tignoolajiyada, falanqeeye, suuqgeynaha dhijitaalka ah, khabiirka xidhiidhka dadweynaha, naqshadeeyaha shabakada… iyo wax kasta oo u dhexeeya. Ma aha in la sheego sida aad ula macaamili doonto booqdayaasha Goorma Waxay ka yimaadaan - laga bilaabo qabashada xogta, cabbirka, isgaarsiinta suuq-geynta, safarrada dhijitaalka ah, iwm.
Tags: gaarsiinta bloggermuhiimka ah webkagoogleganacsiga googlesababaha darajaynta googlehttpsinfographicisku xirka gudahalinksliistada deegaankaraadinta maxalliga ahmetadatamobilada-marka horekobcinta boggadarajo dabiici ahraadinta dabiiciga ahwacyigelinxawaaraha boggahagaajinta xawaaraha boggaarrimaha saamayntajajabka hodanka ahshemaqorshe.degel aamin ahSEOSEO infographicdhismaha goobtasslkhibrada isticmaalaha
Fahmidda Xayeysiiska Barnaamijyada, Isbeddelladeeda, iyo Hogaamiyaasha Ad Tech-ga